साझा पार्टीले २०४६ पछिको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
साझा पार्टीले २०४६ पछिको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्ने !
२०७६ भाद्र २८ गते शनिवार
साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सत्तामा पुगे पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको परिकल्पना गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मिश्र काठमाडौं १ बाट पराजित भएका हुन्। संघीय संसद्‍मा उनको पार्टीको प्रतिनिधित्व नै छैन। तर उनले शनिबार कास्की जिल्ला संयोजक र पोखरा महानगर संयोजक घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् निर्णयको परिकल्पना सुनाएका हुन्।
सर्वहारा, गरिब जनताको नाममा राजनीति गरेका नेता जनताको दुःखमा सहयोगी हुन नसकेको उनले सुनाए। हिजो चप्पल बजाउँदै हिड्ने नेताहरु आज सिंगापुरमा उपचार गराउदै गर्दा सर्वहारा जनता औषधि मुलो नपाएर मृत्यु भइरहेको उनले बताए। ति सर्वहारा जनताको घाउँमा मलमलगाउने नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने उनले सुनाए। त्यसका लागि पोखरेली नागरिकले यस जनमत संग्रहमा साझा पार्टीलाई जिताउने उनले विश्वास गरे।
कार्यक्रममा पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख केशव दाहाललगायतले पनि बोलेका थिए। यसै कार्यक्रममा साझा पार्टीले कास्की जिल्ला संयोजकमा अर्जुनप्रसाद खनाल र पोखरा महानगर संयोजकमा मनकाजी गुरुङ भएको घोषण गरेको थियो।